Solu Medrol (Methylprednisolone) (ဆိုလူ-မီဒရိုလ်) - Hello Sayarwon
Solu Medrol (Methylprednisolone) (ဆိုလူ-မီဒရိုလ်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Solu Medrol (Methylprednisolone) (ဆိုလူ-မီဒရိုလ်)
Solu Medrol (Methylprednisolone) (ဆိုလူ-မီဒရိုလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Solu Medrol (Methylprednisolone) (ဆိုလူ-မီဒရိုလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Solu Medrol (Methylprednisolone) (ဆိုလူ-မီဒရိုလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Solu-Medrol® ဟာ ကော်တီကိုစတီးရွိုက် အမျိုးအစားဆေး ဖြစ်ပြီး ဖောရောင်ခြင်း၊ပြင်းထန်စွာ ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊adrenal ဂလင်း ပြဿနာများ၊အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း၊ပန်းနာရင်ကျပ်ဝေဒနာ ခံစားရခြင်း၊သွေး သို့မဟုတ် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊မျက်စိနှင့် အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊lupus ရောဂါ၊အရေပြားပြဿနာများ၊ကျောက်ကပ်ပြဿနာများ၊အူမကြီးရောင်ရမ်းခြင်း၊multiple sclerosis လို့ခေါ်တဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါတမျိုး ပျံ့နှံ့ခြင်းတို့မှာ အများဆုံး အသုံးပြုပါတယ်။
Solu Medrol (Methylprednisolone) (ဆိုလူ-မီဒရိုလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
သူနာပြု သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ထားသော ကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်က သင့်ကို ဆေးထိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ အကြောထိုးဆေး အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်သလို အသားထိုးဆေးအဖြစ်လည်း သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရောဂါအခြေအနေ သက်သာလာတဲ့အထိ ဆရာဝန်က ထိုးဆေးကို ဆက်လက်ပေးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ အာနိသင်တူညီတဲ့ သောက်ဆေးအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှု တစုံတရာ ရှိနေရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး သင့်ပါတယ်။
Solu Medrol (Methylprednisolone) (ဆိုလူ-မီဒရိုလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Solu-Medrol® ကို မသုံးစွဲခင်မှာ အောက်ပါအခြေအနေတွေ ရှိနေရင် သင့်ဆရာဝန်ကို အသိပေးရပါမယ်။
ဓါတ်မတည့်ခြင်း : Solu-Medrol® နဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း။ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ဆေးနဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့ ဆေးညွှန်းမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အခြားသော ဆေး၊အစားအစာ၊ဆိုးဆေး၊တာရှည်ခံအောင် ပြုလုပ်သော ဆေးများ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
အခြားသော ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြောင့် Solu-Medrol® နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကို သုံးစွဲနေရခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Solu Medrol (Methylprednisolone) (ဆိုလူ-မီဒရိုလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Solu Medrol (Methylprednisolone) (ဆိုလူ-မီဒရိုလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အခြားသော ဆေးဝါးများနည်းတူ Solu-Medrol® ဟာလည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အများစုဟာ ဖြစ်ခဲပြီး ထူးထူးခြားခြားကုသမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆေးသောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ပြဿနာတစုံတရာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
အရေပြားမှာ အရောင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊အမည်းစက်များ ထွက်လာခြင်း။
အနီရောင်၊ပန်းရောင်၊ခရမ်းရောင်၊အညိုရောင် အကွက်၊အဖုများ အရေပြားပေါ်တွင် ပေါ်လာခြင်း။
ဆေးထိုးထားသော အရေပြားနေရာတွင် ချိုင့်နေခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Solu Medrol (Methylprednisolone) (ဆိုလူ-မီဒရိုလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Solu-Medrol® ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
 Amphotericin B;
 Rifampin သို့မဟုတ် အချို့သော ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးများ (ဥပမာ clarithromycin, erythromycin);
 သွေးကျဲဆေးများ (ဥပမာ warfarin)။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါများအတွက် အသုံးပြုသော ဆေးများ (စတီးရွိုက်မဟုတ်သော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ ဥပမာ aspirin, celecoxib, ibuprofen);
 အင်ဆူလင် သို့မဟုတ် အခြားသော ဆီးချိုဆေးများ သောက်နေရခြင်း (ဥပမာ glyburide,metformin) သို့မဟုတ် မဟော်မုန်း estrogen သုံးစွဲနေရခြင်း (ပဋိသန္ဓေတားဆေးများ၊ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုခံယူနေရခြင်း) ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်း။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Solu Medrol (Methylprednisolone) (ဆိုလူ-မီဒရိုလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Solu-Medrol® က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Solu Medrol (Methylprednisolone) (ဆိုလူ-မီဒရိုလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Solu-Medrol® ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ ဥပမာ
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ။
Adrenal ဂလင်းပြဿနာများ (ဥပမာ Cushing syndrome)။
အာရုံကြော သို့မဟုတ် ကြွက်သားရောဂါများ (ဥပမာ myasthenia gravis)။
မကြာသေးမီက ရုတ်တရက် နှလုံးထိခိုက်ထားခြင်း။
သန်ကောင်ရှိခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Solu Medrol (Methylprednisolone) (ဆိုလူ-မီဒရိုလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Solu-Medrol® ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ထိုးဆေးဖျော်ရန်ဆေးမှုန့် : ၅၀၀ မီလီဂရမ်၊ ၁၀၀၀ မီလီဂရမ်။
Solu-Medrol® ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Solu-Medrol® (Methylprednisolone). http://www.mayoclinic.org/drugs-
Solu-Medrol® (Methylprednisolone). http://www.webmd.com/drugs/2/drug-
6135/solu-medrol- injection/details. Accessed September 23, 2016.
Solu-Medrol® (Methylprednisolone). https://www.drugs.com/pro/solu-
medrol.html. Accessed September 23, 2016.